Ngwa ITSM | ServiceOps | Motadata
Jikwaa IT site na ya
Platform nwere AI nke na-enye ndị otu IT ikike ịnakwere mgbanwe ngwa ngwa n'ofe ndị mmadụ, usoro na teknụzụ.
Jiri ngwa ngwa ngbanwe dijitalụ
Njikwa ọrụ ọgụgụ isi
Platform dị n'otu nke gụnyere PinkVERIFY Certified Service Desk, Asset Manager, and Patch Manager to Streamline Business Processes gafee Òtù Na-enweghị Mkpa Ngwá Ọrụ Ndị Ọzọ.
Megharịa nnyefe ọrụ ime gị
Motadata ServiceOps bụ ngwa ITSM na-akwado ITIL nke na-eji AI/ML ebuli ma kwalite nnyefe ọrụ n'ofe usoro azụmaahịa dị iche iche.
Bulite nrụpụta nke ndị na-ahụ maka desktọpụ ọrụ gị site na ọrụ tiketi AI na-ebugharị, yana ibu ọrụ dịka otu n'ime ihe ndị a.
AI bara uru
Nweta akpaaka nke AI kwadoro maka ọrụ dị ka ọrụ ma ọ bụ nnyegharịgharị mgbe mmebi SLA gasịrị.
Kwalite ọrụ onwe onye site na ntụnye amamihe sitere na ntọala ihe ọmụma mgbe ị na-eke tiketi arịrịọ/ihe omume.
Megharịa atụmatụ ITAM: nwetakwuo, mefuo obere
Jikwaa nghọta zuru oke nke akụrụngwa IT na nke na-abụghị IT site na iji ihe njikwa akụrụngwa anyị wee ghara idafu ngwa ahịa gị, nke usoro ITIL kwadoro.
Njikwa okirikiri ndụ zuru oke
Njikọ miri emi na tebụl ọrụ anyị iji mee ka usoro nke ijikwa usoro ndụ nke SA na HA dị mfe.
Nchọpụta akụrụngwa akpaaka
Nchọpụta ngwa ahịa na-enweghị onye nnọchite anya.
Ebe nchekwa data bara uru
Ebe nchekwa data CI siri ike jikwaa IT na akụrụngwa na-abụghị IT.
Belata adịghị ike nchekwa site na iji patching akpaaka
Belata ihe egwu nchekwa wee bulie arụmọrụ arụmọrụ site na ijikwa ebe njedebe niile kesara na idobe sistemụ niile site na iji sọftụwia njikwa patch anyị na-emezi usoro ndụ njikwa patch dum.
Njikwa Patch akpaaka
Mepụta nyocha adịghị ike na mkpọchi site na ebe etiti.
Gbochie mpe mpe akwa
Gbaa mbọ hụ na nnwale na nkwado kwachie tupu ikesa n'ofe njedebe.
Nweta nnabata na nchọta ahụike sistemu na-apụ apụ na akụkọ.
Mee mkpebi ntụkwasị obi na nyocha & akụkọ
Motadata ServiceOps nwere akara dashboard 20+ OOB maka ndị dị iche iche. Ewezuga nke a, ndị ọrụ nka nwere ike iwepụta na ịhazi akụkọ nyocha na arụmọrụ na-aga na-enwetaghị nka ndị ọzọ maka ajụjụ SQL siri ike ma sie ike.
Onye nrụpụta mkpesa ngwa ngwa
Jiri wijetị dọrọ ma dobe ihe nrụpụta dashboard.
Akụkọ OOB maka ikpe a na-ejikarị eme ihe n'ofe ọrụ ITIL.
Ụdị mkpesa omenala iji nabata ihe azụmahịa dị iche iche chọrọ.
Platform ITSM nwere ike ịgbatị nke AI na akpaaka nwere ọgụgụ isi kwadoro.
Automation na-arụ ọrụ na categorization
NLP kwadoro Virtual Agent maka ọrụ onwe
CI nchekwa data maka HA na SA
Nbunye akpaaka na nnwale nke patches
Motadata ServiceOps gụnyere modul atọ: Desktọpụ ọrụ, onye njikwa akụ, na onye njikwa patch iji nyere aka kwalite usoro azụmahịa gị.
Ụlọ ọrụ ServiceOps
Oche ọrụ PinkVERIFY gbaara agbazinye nke na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ kwụsị ma na-eme ka mgbanwe dijitalụ dị ngwa site na iji AI mkparịta ụka na akpaaka smart.
Onye njikwa akụ ServiceOps
Ngwọta ITAM nke na-enyere ndị otu aka aka imezi usoro ndụ ngwụcha ruo ọgwụgwụ nke ma akụ IT na ndị na-abụghị IT n'ofe nzukọ a.
Onye Ọrụ ServiceOps Patch Manager
Ngwọta njikwa patch emebere iji nyere ndị otu dị iche iche aka ijikwa, hazie, na megharịa usoro ndụ njikwa patch.
Motadata AIOps bụ ikpo okwu arụnyere na usoro mmụta miri emi maka ịrụ ọrụ IT nke na-enweta nghọta site na metrik, log na data okporo ụzọ netwọkụ, site na ntinye data akpaghị aka site na otu onye ọrụ. Site na nchọta ruo ngbanwe, injin AI na-eme ka arụmọrụ arụ ọrụ dịkwuo mma ma na-eme ka mgbanwe dijitalụ dịkwuo elu.
Site na otu
Kedu ihe dị mkpa njikwa ọrụ IT dị?
Njikwa ọrụ IT (ITSM) bụ otu usoro na omume nke ụlọ ọrụ IT na-eji jikwaa ọrụ IT ha n'oge ndụ ha niile. ITSM na-ahazi ọrụ otu IT gburugburu nnyefe ọrụ, na-eme ka ndị otu azụmaahịa nweta ọrụ ha chọrọ iji rụọ ọrụ ha kwa ụbọchị nke ọma.
ITSM na-ejikọta ebumnuche IT na omume otu ọgbakọ yana ebumnuche azụmaahịa zuru oke. Ọ na-ebelata ọnụ ahịa IT, na-enye ndị azụmaahịa ohere ịkwalite nloghachi ha na ntinye ego ma nweta ihe kacha mma na mmefu ego IT ha. ITSM bụ usoro usoro IT na-akwado nghọta na ịza ajụjụ n'etiti IT na azụmaahịa.
Kedu ihe bụ ITSM Framework?
Usoro ITSM bụ usoro gọọmentị nke omume kacha mma nke na-enye ntụzịaka ziri ezi maka njikwa ọrụ, na-eme ka mmepe nke ọrụ ndị a na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Usoro ITSM na-akọwapụta usoro na usoro ọkọlọtọ iji kwalite nrụpụta IT ma na-akwado ọtụtụ ọrụ IT dị ka netwọkụ, ọdụ data, na ngwa, yana mmemme azụmahịa na-abụghị IT.
Ụfọdụ n'ime usoro ITSM kachasị ewu ewu bụ ITIL, COBIT, ISO/IEC 20000, MOF, USMBOK, Six Sigma, TOGAF, wdg.
Kedu ihe bụ ITIL vs ITSM?
ITSM bụ usoro usoro ndị otu na-eji jikwaa ma na-ebuga ọrụ IT ha yana nke ndị ọrụ nwere ike ịrịọ arịrịọ metụtara IT na ịkọ akụkọ. ITSM kwadoro ebumnuche nke nzukọ IT yana ihe achọrọ azụmaahịa.
ITIL (Ọbá akwụkwọ akụrụngwa akụrụngwa ozi) bụ usoro pụtara na mbụ na 1980 dị ka nchịkọta omume kacha mma maka ITSM. ITIL nyere ụlọ ọrụ IT ụkpụrụ na nnabata sara mbara nke omume kachasị mma, ọ na-aga n'ihu na-abụ ọkọlọtọ kachasị maka ndị otu IT n'ụwa niile ma a bịa n'inye njikwa ọrụ IT nke ọma.
Usoro ITIL na-eje ozi dị ka maapụ okporo ụzọ maka azụmaahịa IT ọgbara ọhụrụ ịgbaso mgbe ha na-emejuputa ITSM iji wetara ndị otu ha uru dị ukwuu site na njikwa dị mma nke usoro ndụ ọrụ IT.
Kedu usoro 5 nke ITIL?
A na-ekewa usoro ITIL n'ime usoro ndụ ọrụ ise: Strategy Service, Design Service, Transition Service, Operation Service, and Continal Service Improvement.
Ebumnuche nke Strategy Ọrụ bụ ịkọwapụta ọrụ ndị otu IT ga-enye yana ike ndị a ga-achọ imepụta.
Nhazi ọrụ na-eche banyere ịmepụta ọrụ IT ọhụrụ yana mgbanwe na nkwalite nke ndị dị ugbu a.
Ebumnuche nke Transition Service bụ iwulite na ibuga ọrụ IT n'ụzọ ahaziri ahazi ka ha nwee mmetụta kacha nta na ọrụ ndị dị ugbu a.
Ọrụ ọrụ na-ekwe nkwa na a na-enye ọrụ IT nke ọma na nke ọma.
Nkwalite ọrụ na-aga n'ihu (CSI) na-agba mbọ ka ọ na-aga n'ihu ịkwalite nrụpụta na arụmọrụ nke usoro na ọrụ IT site na iji usoro njikwa mma.